GOORYAANKA KU JIRA LO'DA IYO WEYLAHA: CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA, LIISKA DAAWOOYINKA - XOOLAHA
Sida loo saaro Gooryaanka laga soocayo lo'da
Sida xayawaanka kale, helminthiasis ee lo'da waa cudur caadi ah. Maqaalka waxaan ka hadli doonaa sida ay khatarta u tahay, haddii ay tahay in loo baahan yahay in la daaweeyo iyo hababka daweyntu ugu waxtar badan yihiin.
Waa maxay gooryaanka khatarta ah ee lo'da, qashinka iyo weylaha?
Nooc kasta oo ka mid ah xayawaanka beeraha wuxuu saameeyaa noocyo kala duwan oo gooryaan ah, kuwaas oo saameyn ku yeesha caafimaadka xoolaha. Noocyada kala duwan ee gooryaanka, oo inta badan ku dhacda lo'da, waxay si xun u saameyn kartaa beerka xayawaanka waxayna dhaawici kartaa hababka dheef-shiid kiimikaadka, iyo sidoo kale habka dheef-shiidka.
Waxay dhaawici karaan beerka si aad u badan oo ay xannibaan dhuumaha xiidmaha. Uumiyeyaashu waxay hoos u dhigaan jirka lo'da, ka dhumiya, waxay wiiqaysaa nidaamka difaaca, taasoo horseedi karta hoos u dhaca caanaha, kordho dhacdooyinka cudurrada daba dheeraaday.
In jiritaanka ku dul noolaanta jirka ee lo'da, fiitamiinada iyo macdanta in xayawaanku uu ka helo quudinta ha u galin si ku filan: ku dhowaad dhammaantood waa la wada baabbi'inayaa gooryaanka. Marka uu ku dhaco lafa-qabatada, waxaa jiri kara qalalaas, peritonitis, natiijada taas oo ah halis.
Baro sida injirta looga qaado lo'da.
Haddii aan waxba laga qabanin si looga saaro dulin-saarku, waxay si tartiib ah u sumeyn doonaan jirka xayawaanka qaba sunta, kuwaas oo la sii daayo inta lagu jiro hawlahooda muhiimka ah. Natiijo ahaan, guud ahaan caafimaadka iyo waxsoosaarka lo'da ayaa la xanuunsanaya. Sunta waxay ku faaftaa jidhka oo dhan dhiig, xaaladaha daran waxay keenaan necrosis unug.
Sidee infekshanku u dhacaa?
Gooryaanka iyo ukumahooga ayaa laga saaraa saxarada xayawaanka. Baaxadda cawska ee wadajirta ayaa geli kara mareenka caloosha ee xayawaanka caafimaadka leh, oo keena infekshankooda. Haddii noocyada kala duwan ee xoolaha la wada wadaago, ka dibna dulinka ayaa xayawaan ka guuri kara xayawaan mid kale: tusaale ahaan, laga bilaabo idaha ilaa lo'da ama dhinac kale. Kaamirada ku dul-noolaashadu waa shinbiro, qoob-ka-cayaar ama cayayaanka kale ee ku faafay daaqa. Marka jirku gudaha ku jiro, dabacsan ama cayayaanka ayaa la qaadaa iyaga iyo gooryaanka. Sidoo kale, dulinku wuxuu geli karaa jidhka lo'da qaniinyada cayayaanka, oo ay weheliso quudin iyo biyo.
Ma taqaanaa? Lo'da waxay u seexdaa waqti gaaban. Hurdadooda ugu qoto dheer waxay socotaa 1 ilaa 5 daqiiqo.
Cudurku wuxuu ku dhici karaa isagoo aan lahayn calaamado ama muujinta calaamadaha astaamaha, oo ay ku jiraan:
luminta wax soo saarka, gaar ahaan hoos u dhaca caanaha;
joogitaanka joogtada ah ee xayawaanka ee gobolka supine, diidista inuu u kaco cagihiisa, daciifnimo;
muuqaal niyad jab leh;
joogitaanka xanuunka caloosha iyo mindhicirka ee qaabka shubanka ama caloosha;
dhiig yari iyo daal;
caleemaha xuubka maskaxda;
luminta dharka dhogorta;
tayada caanaha oo yaraaday.
Marxaladaha ugu sareeya waxay ku biiraan:
sanka oo dareera;
Calaamadaha gantaal helmin waxaa badanaa lagu sheegaa xayawaanka yaryar.
Waa muhiim! Haddii aad ka shakisan tahay in lo'daadu leeyihiin gooryaan, waa inaad sameysaa imtixaan si loo xaqiijiyo ogaanshaha iyo ogaanshaha nooca dirxiga si loo doorto habka daaweynta saxda ah. Cilmi-baarista helmin-ka helmin waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu saleynayo falanqaynta saxarada.
Maanta waxaa la ogyahay joogitaanka noocyo badan oo dirxi ah. Waxay u kala qaybsan yihiin caloosha iyo mindhicirrada, neefsashada, subcutaneous, duufaannada isdaba-joogga ah, lakabyada, iwm.
Xulashada daawada loogu talogalay daaweyntu waxay ku xiran tahay nooca dulin, waxaa sidoo kale jira qaabab ballaadhan oo leh hababka kala duwan ee burburka. Marka gooryaanka la ogaado, xitaa hal xayawaan ah, lo'da oo dhan waa la gooyaa. Marka laga soo tago daroogada, gooryaanka waxaa sidoo kale laga helaa hababka dadweynaha.
Video: sida loo helo gooryaanka qoryaha
Inta badan daaweynta duullaanka helmin-daaniga ah sida daawooyinka loo isticmaalo:
"Alvet", "Flubendazole" - wuxuu saameeyaa nidaamka nafaqeynta ee nafaqeynta. Iyadoo ku xiran nooca dulin, qiyaasta "Alveta" oo ah 1 xayawaan ah ayaa u dhaxaysa 3.75 g ilaa 5 g halkii 100 kg oo miisaanka nool, halka Flubendazole - 10 mg halkii 1 kg oo miisaankiisu yahay;
Albendazole (Alben) - waxay cadaadisaa dheef-shiid kiimikaadka marxaladaha dhammaan heerarka koritaankooda. Qiyaasta: 75-100 mg 10kg oo miisaankeedu yahay. Hirgelinta hal hal;
"Tetramizole" - curyaanku waa cirrid. Qiyaasta: 1.5 g halkii 10 kg;
"Febtal" - waxay keenaysaa dheef-shiid kiimikaadka carbohydrate ee dulinka iyo dhagxaanta awoodda ay u leeyihiin inay ku dhuftaan. Qiyaasta: 1 ml halkii 1 kg oo miisaankeedu yahay.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cudurrada ku dhufan karaan lo'da iyo sida loo daweeyo.
Daawooyinka waxaa la siiyaa hadal ahaan. Xaddiga mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa loo xisaabiyaa iyadoo ku xiran miisaanka xayawaanka, markaa ka hor intaan la bilaabin daroogada waa in la miisaamaa lo'da. Hal qadar ayaa loo qoondeeyey qof ahaan shakhsi ahaan.
Kuwa aan waligood samayn samaynta daadadku waa inay ogaadaan in ay adagtahay in la maamulo daroogada oo kali ah. Hal qof waa inuu hagaajiyaa madaxa xayawaanka, iyo kan labaad - inuu ku quudiyo. Ka dib marka la soo bandhigo daaweynta waa lagama maarmaan in la sameeyo diiwaanka, halkaasoo lagu sheegayo taariikhda, waqtiga iyo qiyaasta. Kadib markii daroogada la isku duro, dharka qofka daadatay iyo qalabka waa in la nadiifiyaa. Sababtoo ah daawooyinka caadi ahaan sunta ah, tallaabooyinka badbaadada shakhsi ahaaneed waa in la fiiriyaa marka lala shaqeynayo - dhaq gacmaha si fiican u dhaqaa kahor iyo ka dib hawlgalka, ha cunin oo cabbin, ha cabin, jidhka iyo gacmahana ilaali, iyo waji - maaskaro.
Waa muhiim! Marka la daaweynayo mukhaadaraadka, waa lagama maarmaan in la raaco talooyinka dhakhtarka xoolaha ee qiyaasta ama talooyinka ku xiran daroogada. Waa suurtagal in aan laga guurin qiyaasta ama nidaamka maamulka daroogada iyadoon fasax laga haysan: tani waxay waxyeello u geysan kartaa caafimaadka xayawaanka, maadaama ay daawooyinka dhammaantood leeyihiin saameyno.
Badanaa, kalluunka xooluhu wuxuu la xiriiraa caawinta daaweynta dadweynaha, laakiin daaweyntoodu aad bay u dhib badan yihiin waxayna ka dheer yihiin daroogooyinka. Inta badan daawooyinka dadweynaha waxaa loo isticmaalaa ujeedada ka hortagga.
Cows waxaa loo soo bandhigay cunto:
dhirta iyo saliida;
dharka ugu sarreeya ee leh walxaha anthelmintic;
Miyaan cabi karaa caanaha oo waxaan cunaa hilib
Maaddaama qaar ka mid ah noocyada goosgooska ee ka soo baxa lo'da ay u tagi karaan qof waxayna u keeni karaan waxyeelo caafimaadkiisa, ma cuni kartid hilibka iyo caanaha lo'da cudurka qaba. Sidoo kale, alaabtaasi waa mamnuuc in ay ku quudiyaan xayawaanka kale, sida bisadaha iyo eyda.
Daaweynta ka dib, hilibka lo'da iyo lo'da waa in aan la wada baabbi'in mudo. Muddada mamnuucidda waxay kuxirantahay dawada loo isticmaalo daaweynta. Tusaale ahaan, haddii daaweynta la sameeyay daroogada "Alben", markaa xaddidaadda cunista hilibka hilaacda waxay qaadataa 3 toddobaad, iyo isticmaalka caanuhu waa 1 toddobaad.
Ka hortagga tallaabooyinka ka hortagga ah waxay ka caawisaa in si weyn loo yareeyo halista infekshan helminth:
kormeerida xaaladda biyaha, beddelkeeda waqtigeeda oo ku saabsan foornada cabitaanka;
xakamaynta tayada quudinta;
nadiifinta waqtigii loogu talagalay cuntada oo dhulka ku dhacday;
ilaalinta qalalan iyo nadiifinta mooska;
jeermi-dilka qalabka iyo goobaha xoolaha lagu hayo laba jeer sannadkii;
daaqsinta cunnooyinka dhallinyarada si gooni gooni u ah shakhsiyaadka qaangaarka ah;
hawlaha deworming joogto ah - laba jeer sannadkii, xilliga dayrta iyo gu'ga.
Nadiifinta barnaanta, sida habka looga hortago khalkhalka helminthic
Sidaa darteed, helminthiasis waa cudur caan ah oo caadi ah, taas oo horseedi karta dhibaatooyin caafimaad oo halis ah xayawaanka iyo saameynta xun ee dhaqaale ee dhaqaalaha.
Ma taqaanaa? Indhaha qadku wuxuu ku iftiimin karaa mugdiga haddii ay eegto nalalka baabuurka ama iftiinka. Tani waxay sabab u tahay joogitaanka qaabdhismeedka xubnaha aragtida isbeddel gaar ah oo muujin kara iftiinka iyo hagaajinta heerka hooseeya.
Haddii ay calaamaduhu dhacaan, daaweynta waa in la sameeyaa, hase yeeshee, way fududahay oo ka raqiisan tahay in laga hortago caabuqa by Gooryaanka, iyadoo la socdo tallaabooyin ka hortag ah.